IGUMBI ELINOMNYANGO OPHUMELA NGAPHANDLE/UMATSHINI OKHUPHA UMOYA OBANDAYO OKANYE OSHUSHU - I-Airbnb
IGUMBI ELINOMNYANGO OPHUMELA NGAPHANDLE/UMATSHINI OKHUPHA UMOYA OBANDAYO OKANYE OSHUSHU
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguBelle
QAPHELA: silandela ZONKE IINKQUBO ZEMPILO ONKE AMAGUMBI ABULAWE IINTSHOLONGWANE NGOTYWALA obuyi-70%.
Indlu ekufutshane ne-Mata Atlanticica, indawo entle, efihlakeleyo, ebanzi, engena umoya, iisilingi eziphezulu kunye nesikrini sokukhusela iingcongconi kumagumbi nakwindlu yonke. Le ndlu inendawo yokugcina amanzi engaphantsi komhlaba. Iishawa ezimbini ezibandayo neshawa enye eshushu phandle. Ibhalkhoni enkulu enomoya kunye neendawo zokutyela ilanga. Indlu eyakhiwe ngononophelo olukhulu kunye nothando lokuyifumana.
Indlu kulwandle lwaseBarequeçaba, ulwandle olucocekileyo noluzolileyo. Indlu ineebhloko ezi-3 ukusuka elunxwemeni, kunokwenzeka ukuba uhambe uye kwiivenkile zombini kunye neevenkile zasekhaya. Indawo yokubhaka, imarike, ikhemesti, indawo yokutyela, ibha kunye nesikhululo segesi ziibhloko ezi-3 nje ukusuka endlwini.
I-suite iqulethe i-queen bed kunye nebhedi enye, ii-cotton sheets, i-4 pillows, iikhabhinethi, i-air conditioning eyahlulayo kunye nesikrini se-musketeer. Imibono yedama kunye negadi. Ukuzola kunye nohlaza kakhulu.
indawo entle- yonke into ikufuphi:
- Carmela - 300m
- Pizzaria do Sino - 250m
- Mozebas Bar / Pizzeria- 200m
- Phumla. Usapho - 6 km
* I-SUPERMARKET / IBHEKI:
- Imarike yeBarequeçaba - 300m
- Indawo yokubhaka iBarequçaba - 300m
- Intaba yeSugarloaf - 7 km
* Amanqaku omdla:
- Pharmacy Barequeçaba -300m
- Matriz Square kunye neCawa - 5 km
- Itheminali yesikhephe seFerry- Ilha Bela - 5 km
- Ithiyetha kaMasipala - 4.5 km
- Sirena Club e Maresias - 14 km
Ndishiya iindwendwe zam zikhululekile. Ndifumaneka ngalo lonke ixesha ukuba bafuna ulwazi oluthile.